10 Amarada Pinterest ee Ganacsiga | Martech Zone
Khamiis, Juun 14, 2012 Sabti, Febraayo 4, 2017 Douglas Karr
Pinterest waxay sii ahaaneysaa isha horseedka taraafikada ee Martech… inta badan annaga Macluumaadka Suuqgeynta guddiga. Waqti badan kuma qaato Pinterest sida kuwa kaleba u qabtaan, laakiin waxaan gebi ahaanba fahamsanahay sababta ay u tahay barxadda weyn. Waa labadaba muuqaal ahaan rafcaan iyo fudeyd in la adeegsado. Waxaad ku dhex wareejin kartaa tan macluumaad ah hal cirib oo farta ah!
Waxyaabaha laga filayo marka ganacsigu ku biiro adeeg sida Pinterest aad ayuu uga duwan yahay macaamilka ku soo biiraya, in kastoo. Haddii aad rabto in ganacsigaagu si dhab ah uga faa'iideysto Pinterest si uu u wado taraafikada, waxaad u baahan tahay inaad daweyso guddi weyn oo aad wadahadalka sii wadato. Macaamiilkeena, Liiska Angie, waxay leedahay joogitaan layaableh oo ku saabsan Pinterest content ku dhajinta waxyaabaha ku saabsan wax kasta oo ka Gawaarida Classic ilaa Windows iyo Albaabada.
Naqshad ahaan Bulsho ahaan iyo Naqshadeynta Mookoo ayaa si wada jir ah u soo jiiday sawirkan, The 10 Amarada Isticmaalka Pinterest ee Ganacsiga, kugu hagta adiga oo adeegsanaya tabobarrada ugu fiican iyo talooyin ku saabsan gelinta Pinterest inay ka shaqeyso istiraatiijiyadaada suuqgeynta warbaahinta bulshada. Infographic-ku wuxuu ku salaysnaa a ku dheji qoraalka Amy Porterfield.
Tags: Pinterestpinterest ganacsiga
Jun 15, 2012 saacadu markay ahayd 6:49 AM
Waxaan ku isticmaalay boggaggayga natiijooyinkuna way fiicnaayeen, waxay ka booday bogga 7 illaa # 5 wax ka yar 2 toddobaad.
Furaha ayaa ah waa inaan helnaa boggeena internetka oo ay dad badan soo daabacaan oo ay dib u daabacaan, taas oo ah qaybta ugu adag. Inta badan isticmaaleyaasha 'pinterest' ma sameyn doonaan dib-u-dhiska marka aysan la mid ahayn wixii aan ku dhajinnay.
Waxaan sameeyaa wax fudud oo ah inaan u dhiibo fiverr waxaanan boggeyga ku dhajiyay 75 qof, ma ogi sida uu u sameyn karo kaliya raadinta adoo ku qoraya pinterest fiverr waxaadna ka heli doontaa TOP. Iibiyeyaal kale oo badan ayaa bixiya adeegyo qiimo badan oo ku saabsan fiverr laakiin waayo-aragnimadayda kama dhigi karaan degelkeyga inuu ku sii kordho SEO. Ma garanayo sababta.
Sababaha ay pinterest ugu fiicantahay SEO:
1. Waxaad ubaahantahay inaad kudhex xirto biinankaaga si aad uhesho websaydhkaaga SEO.
2. Mar haddii degelkeenna la dhajiyay waxay leedahay dib-u-xireyaalno.
3. In kasta oo Pinterest aysan taageerin qoraalka barroosinka (marka laga reebo iskuxirka url), wali wey kufiican tahay dhigista keywords-keyga sharaxaada.